ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို | သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမော်တော်ဆိုင်ကယ် catalog, ရုပ်ပုံများ, ratings, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများနှင့် discusssions
Home →မော်ကွန်းတိုက် tag ကို "ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို"
2008 ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကစမ်းသပ်ပြီး!
အခုလည်း: ဆူဇူကီး | 19 Jun 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2008 ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကစမ်းသပ်ပြီး!
အခုလည်း: ဆူဇူကီး | 11 Jun 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Suzuki at the 2007 Frankfurt Motor Show – Next Car Pty Ltd – 17th August, 2007
ဆူဇူကီး GSX-R ကိုတိုကျိုဘို့ /4Concept ကို update ကို?
အခုလည်း: ဆူဇူကီး | 8 Jun 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် ဆူဇူကီး GSX-R ကိုတိုကျိုဘို့ /4Concept ကို update ကို?
ဆူဇူကီး GSX-R ကိုတိုကျိုဘို့ /4Concept ကို update ကို? ဆူဇူကီး GSX-R ကိုတိုကျိုဘို့ /4Concept ကို update ကို? June 22, 2005 Rumours emanating from Japan suggest Suzuki might be ready to put the GSX-R/4 concept machine it first showed four years ago into production with an announcement due that this year’s Tokyo Motor Show. The multi-featured GSX-R/4 concept car combined Suzuki’s automotive and motorcycle technologies to createaone-of-a-kind high-performance vehicle using the 1.3-liter 173 horsepower engine of the GSX1300R Hayabusa motorcycle to createahigh-tech, aluminium-framed, light weight 640 kilogram two-seater sportscar capable of 140 mph and motorcycle-like acceleration. With the rumours already ...
2008 ဆူဇူကီး B-ရှငျဘုရငျ
အခုလည်း: ဆူဇူကီး | 1 Jun 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2008 ဆူဇူကီး B-ရှငျဘုရငျ
Suzuki @ Frankfurt ’07 : သတင်း & အစီရင်ခံစာများ : Motoring : Web ကို Wombat
အခုလည်း: ဆူဇူကီး | 20 May 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Suzuki @ Frankfurt ’07 : သတင်း & အစီရင်ခံစာများ : Motoring : Web ကို Wombat
အခုလည်း: ဆူဇူကီး | 14 May 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် :: Suzuki B-king ::
အခုလည်း: ဆူဇူကီး | 23 ဧပြီ 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် Suzuki B-King motorcycle test ride thisisbristol Bristol Post
အခုလည်း: ဆူဇူကီး | 22 ဧပြီ 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2008 Suzuki B-King GSX1300BK(same base Gen2 engine as Hayabusa)+Extras
အခုလည်း: ဆူဇူကီး | 18 ဧပြီ 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် The Road : Issue 13 : The B-King – Ian Kerr rides Suzuki’s B-King and…
အခုလည်း: ဆူဇူကီး | 12 ဧပြီ 2015 | ဟာ Off comments အပေါ် 2008 Suzuki B-King Sport Rider
စက်ဘီး Kawasaki ရင်ပြင်လေး စမတ် eScooter Bajaj Discover ဆူဇူကီး Colleda CO Aprilia Mana 850 Ducati 60 Harley-Davidson XR 1200 ခံယူချက် Moto Guzzi 1000 Daytona Injection စက်ဘီး Kawasaki ER-6n ဆူဇူကီး B ကိုဘုရင်က Concept ကို ဟွန်ဒါ X4 အနိမျ့ Down Ducati Desmosedici GP11 ဆူဇူကီး AN 650 တော်ဝင် Enfield Bullet 500 ဂန္ထဝင် ဟွန်ဒါ DN-01 အိန္ဒိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Classic သင်္ဘော MV Agusta 1100 Grand Prix ဟွန်ဒါ Goldwing ရှေ့ပြေးပုံစံ M1 တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအတွက် KTM 125 ပြိုင်ပွဲ Concept ကို ဆူဇူကီး B-ဘုရင်ကနောက်ဆုံး prototype မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဟွန်ဒါအိပ်မက်ကလေးများ Dokitto Brammo Enertia Ducati Diavel ဟွန်ဒါ DN-01 အလိုအလျောက်အားကစား Cruiser Concept ကို